1 NORSK-SOMALISK HØYTIDER, HELLIGDAGER OG TRADISJONER I NORGE ISBN SEVGI ØZALP MELTEM AFAK LUNDSTEN ISBN
3 for å lette deres deltagelse i læreprosesser i skolefag. Tospråklig støttemateriell bygger på følgende pedagogiske loso: Å gi alle elever reelle muligheter til å ta i bruk sitt totale språklige repertoar for å konstruere og styrke deres kunnskapsmessige plattform og kognitivakademiske norskspråklige ferdigheter i sentrale temaområder i ulike skolefag. At heftene har ulike versjoner, men felles lærestoff, virker inkluderende og fellesskapsfremmende. De kan brukes av ere elevgrupper i en og samme gruppe eller klasse, eller i parallellgrupper eller klasser. Jeg er glad for at slike tospråklige hefter om sentrale temaer begynte å bli tilgjengelig for minoritetsspråklige i norsk skole. Jeg håper at støttematerialet vil bli godt likt av lærere og elever. Undertegnede er åpen for konstruktive kommentarer og forbedringsforslag. Tilbakemeldinger fra brukerne vil hjelpe alle medarbeidere, som jobber i de ulike delprosjektene for å utvikle tospråklig støttemateriell, for å forbedre produktene i tiden som kommer. ble utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Jeg retter en stor takk til direktoratets engasjement i opplæringen av språklige minoriteter og støtte. Jeg er av den oppfattning at feltet vil komme et viktig skritt videre når mer tospråklig støttemateriell blir gjort tilgjengelig for ere elevgrupper og lærere. En stor takk retter jeg også til forlagssjef Alf Bergli for hans interesse for opplæringen av språklige minoriteter. Jeg ønsker alle tospråklige lærere, elever og foreldre lykke til med bruk av Kamil Øzerk Prosjektleder
5 Maalmaha munaasabadaha leh Wadan kasta, dhaqan kasta iyo diin kastaba waxay leeyihiin maalmo si gaar ah loo xuso. Xuskaasna waxa loo sameeyaa in lagu xasuusto dhacdooyin tariikhi ah, hanaqoto xag diin ama xag qaran. Norway waxaynu xusnaa maalmooyin taxan oo xag diin iyo xag qaranba ah. Maalmahaasna waxay ku saleysan yihiin taariikh dhacdooyin leh. Hoos waxaan ku soo qaadan doonaa maalmaha xusidooda ay ku saleysan yihiin diinta, caadooyinka iyo sannadka cusub. Kadibna waxaynu soo qaadan doonaa maalmaha qaranka iyo maalmo kale oo loo dabaaldego. MAALMAHA MUNAASABADAHA DIINIGA AH EE LAGA XUSO NORWAY Dhalashadii Ciise Udiyaargarowga munaasabada dhalashadii Ciise waxuu bilowdaa axada afaraad ee ka horeysa habeenka kirismiska, waxuuna dhacaa 24 disember sannad kasta. Axada afaraad ee habeenka kirsmiska ka horeysa waxaa la yiraah axada koowaad ee lafilayo badbaadiyaha (advent). Maalinta la sugayo waa mudadaas 4 todobaad ah ee la isu diyaarinayo habeenka kirismiska.
7 Mudada u dhaxeysa axada koowaad ee maalinta lasugayo ah ilaa habeenka kirismiska waxa lagu magacaabaa waqtiga lasugayo. Axad weliba ee ka horeysa habeenka kirismiska waxaa la shidaa shumac oo muujinaya inta maalmood ee ka harsan habeenka kirismiska. Dugsiyada iyo xanaanadaha caruurtaba wey muujiyaan mudadaa lasugayo iyagoo qabta farshaxan kirismis ah. Halkaas waxa ku diyaariyaan hadiyado kirismis, geedka kirismiska iyo sharaxaad kirismis. Kaniisadaha iyo guryuhuba wey muujiyaan mudadaa la sugayo. Midabka fiyoolaha (suweysari) waa midab ku caan ah maalinta la filayo badbaadiha, qoysas badan ayaa sameysta kalandarka adfentiga ah iyagoo xisaabinayo maalmaha ka harsan maalinta kirismiska. Waqtiga adfentiga oo ah mudada isu diyaarinta waa waqti aad muhiim u ah, isuguna jira adeeg, diyaarin doolshaha iyo sharaxaada kirismiska. Kirismiska waxa logu xusaa dhalashadii Ciise waana muddo 3 maalmood ah. Kirismiska waa xusid diimeed oo muddo dheer ka jirtay Norway. Qoysaska qaarkood si gaar ah ayey u xusaan kirismiska, lakiin dadka badankooda wey isuqurxiyaan, kuna dul wareegaan geedka kirismiska ah, kadibna hadiyado ayey isdhaafsadaan waxaana soo booqda Juleniise. Qoysas badan waxay aqristaan sheekooyin diimeed. Kuwa badan waxay tagaan kaniisadaha. Caadada ah cuntada kirismiska la cuno waa mid muhiim ah, reer walba cunno ucaado ah ayey sameystaan. Reeraha
9 badankood waxay xooga saaraan in ay waqti la qeybsadaan qaraabadooda. Qoysaska wey wada qorsheeyaan kirismiska. Way is booqdaan, sameystaana doolshe (keyg), geedka krismiska iyo guriga wey wada sharxaan. Dukaamada, dugsiyada, xannaanaddaha caruurta iyo wadooyinkaba waa la qurxiyaa waqtiga kirismiska. Iskastoo xilligan kirismiska loo xuso si munaasabad diini ah, xitaa ka hor intaan masiixiyadu soo gaarin Norway, kirismiska waa laagu dabaaldegi jiray. Waayadii hore xusidda kirismiska waxay gaarsiisneed laga bilaabo 13 desember ilaa 13 janaayo. Dadku xaflad weyn iyo cunteyn badan ayey ku jirijireen ilaa ay dhamaato. Shaqaalaha 3-4 maalmood ayey fasax yihiin. Maalmahaasna gaduud ayaa kalanderka loogu muujiyaa. Dugsiyada ilaa 2 todobaad ayey fasax yihiin. Dad qaar waxay doortaan in kirismiska ay wadamo kulul tagaan. Kirismiska kahor iyo inta lagu gudo jiraba, saxiibada shaqada, kuwa shaqowadaaga ah iyo dariskaba Kirismis wanaagsan ayey isku yiraahdaan. Kirismiska dad badan ayaa udira saaxiibadood iyo reerarkooda hambalyo qoraal ah. Sanooyinkii danbe caadi ayey noqotay in sms ama boosto elektaroonik ah isugu diraan salaan kirismis ah.
11 Maalmaha u dhaxeeya maalinta 3aad ee kirismiska ilaa habeenka sannadka cusub waxa la yiraah ruumjuul (romjul). Ruumjuulka dugsiyada way xiran yihiin, lakiin xafiisyada dowlada iyo dukaamada wey furan yihiin. Munaasabada deldelidii Ciise (booskaha) Munaasabada salbinta Ciise waa maalinweyn oo diini ah. Waxaa la yiraa waa maalin diin oo qiimoweyn leh. Diinta kirishtaanka munaasabadaasi waxaa logu xusaa maalinta Ciise la salbiyay oo la dilay, kadibna uu dib uga soo dhaxnoolaaday kuwii dhintay. Maalinta ugu horeysa ee salbinta waxuu ku beegmaa ugu horeyn 22 maarso ugu danbeyna 25 abriil. Munaasabadan waxay gaartaa ilaa 3 maalmood. Maalintaa waxaa weheliya Axada ka horeysa deldelida, khamiistii isdaahirinta iyo jimcihii la deldelay Ciise.
13 Ukunta booskaha waa mid ah caalamad lagu garto booskaha. Ukunta waxay astaan u tahay bacrin iyo nolol cusub, isla markaa sharxida ukunta waa mid ka mid ah caadada booskaha. Astaamo kale oo ku caan ah booskaha waxaa ka mid ah ubaxa jaallaha, naashanaashka laga sameeyo baalasha digaaga og digaaga booskaha. Midabada Jaallo (hurdi) iyo fiyoolaha (suweysari) waxaa lagu tiriyaa midabadda booskaha. Cunooyinka ugu muhiimsan booskaha waa hilibka idiha oo noocyo kal gedisan loo sameeyo. Qoosas badan ayaa waqtigan taga kaniisadaha oo ka qeybala ducada maalintaas. Diinta kirishtaanka ka hor waxaa loo dabaaldegi jiray xaflad gu. Xafladaasi waxay ku beegneed waqtigan booskaha. Waxa loogu dabaal degi jiray dabiicadii oo dib usoo noolaaytay kadib markii usoo maray xilliga qabow. Calaamadihii ugaarka ahaa xaflada gu ga ayaa ku milmay astaamaha booskaha oo welina la adeegsadaa. Shaqaalaha waxa ay helaan waqtiga booskaha 4-5 maalmood oo fasax ah, dugsiyadana waa laxiraa ilaa 8-10 maalmood.
15 Dad badan ayaa booskaha ku qaata buuraha iyagoo ku tamashleynaya, barafka isla markaana isku dhigaya cadceeda gu ga. Dad badan ayaa booskaha ku asteeya liinta bambeelmada iyo shukulaatada Kvikk-lunsj. Qoysaska qaarna wey wada ciyaaraan, ka jaawaabaanna halxiraalaha wargeeysyada kusoo baxa. Dad badan ayaa fasaxa booskaha u dhoofa wadamo kale, gaar ahaan wadamada kulul. Caado kale oo soo korartay waa dadka oo TV-ga ka daawada aflaan taxane ah oo dambi-baarista quseeya. filimada dambi-baarista ah ama aqrista buugaagta ka hadlaya sheeko dambi-baaris ku saleysan. Booskaha ka hor iyo inta lagu gudo jiroba waxay dadku ku salaamaan saaxiibada shaqada, kuwa ay shaqo-wadaaga yihiin iyo dariskaba booske wanaagsan. Dad badan ayaa ehelkooda ama saaxiibadood u dira boostakaar, boostada elektaroonik ah ama sms. Soonoolaashadii Ciise (binse) Binsaha waa maalin diin kirishtaanka ku saleysan oo la qiimeeyo. Waxaan la dabaal degaa 50 maalmood kadib markii Ciise uu ka soo dhex noolaaday dadkii dhintay. Sida diinta kirishtaanka ay sheegeyso biinsaha waxaa lagu xasuustaa markii dadka lagu soo dejiyay ruuxa quduuska ah. Kaniisadaha qaarkood ayaa udabaaldega maalintan xoog saara marka loo fiiriyo qaar kale.
17 Binsaha waxay dadku isu rajeeyaan binse wanaagsan. Binsaha waxaa lagu tiriyaa inuu yahay dhalashadii kaniisadaha. Dheelmintii Ciise Sida diinta kirishtaanka ay qoreyso dheelmintii Ciise waa markii Ciise la dheelmiyay oo cirka loo qaaday. Maalitaani ducooyin fara badan ayaa kaniisadaha lagu qabtaa. Maalintan dugsiyada iyo goobaha shaqadana fasax ayey galaan. Lucia-dii barakeysneyd 13. disember waxaa la muujiyaa maalin barakeysan taasoo lagu xasuusto gabadhii Lucia. Lucia waa gabar talyaani ah. Waxay 1700 sannadood ka hor ku nooleed jasiirada Sicilia. Lucia waa kiristaamad dad badan ayay ka dhaadhicisay iney rumeeyaan Ilaah. Boqorkii Dioklektian muusan jecleysan Svart senker natten seg i stall og stuer. Solen har gått sin vei, skyggene truer. Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, Sankta Lucia, Sankta Lucia! Natten er mørk og stum. Med ett det suser i alle tyste rom som vinger bruser. Se på vår terskel står, hvitkledd med lys i hår, Sankta Lucia, Sankta Lucia!
19 arintaasi, waxuuna go aansaday in Lucia la dilo. Lucia waa ladilay, waxayna noqotay qof diinteeda u dhintay, kadibna waxay noqotay qof shahiid ah. Sannad walba 13. disember ayaa Lucia la xusaa. Sannadka cusub Sannadka cusub waxaanu u dabaaldegnaa ugudubka sannad cusub. Dhaqamada badankood siyaabo kala duwan ayaa loogu dabaaldegaa. Norway waxa sannadka cusub laga dabaaldegaa inta u dhaxeysa 31
21 disember ilaa 1 janaayo. Badanaa dadka reerkooda iyo saaxibadood ayay xaflad u dhigaan. Sannadkii horena waa la macsalaameeyaa kan soo galayana waa la soo dhaweeyaa. Dadka qaarkood ugudubka sannadka cusub, gadaal ayey u fiiriyaan sannadka tagay, iyagoo fiirinayaan waxay soo qabteen iyo waxay rabaan in ay qabtaan sannadka cusub. Dad badan ayaa sannadka cusub ku soo dhaweeeyaa cunno fiican iyo cabitaan. Dayiiran waa cashada ugu caansan maalintan oo kale. Saacaduu markay tahay 12-ka habeenimo waxay dadku ridaad baaruud. Baaruuda carruurta halis ayey ku tahay, waana muhiim in markastaaba uu qof weyni shido baaruuda. MAALMAHA KALE EE LA XUSO Norway waxa ka jiro maalmo badan oo la xuso oo aan aheyn kuwa diin ama kuwa qaran. Qeybtan waxaanu ku soo qaadan doonaa maalmaha noocaas ah. 6. Febaraayo Maalinta saamiska Saamiska waa dadka asaliga ah ee Norway ku nool, 6 febaraayana waa maalintii Saamiska. Siyaabo kale gedisan ayaa maalintan wadanka looga xusaa. Meelaha ay Saamiska degan yihiin, calanka Saamiska ayaa